होलीको आगमनसंगै जनकपुरधामको ठाउँ–ठाउँमा होली मिलन समारोह, क्लोथ बैंक धनुषाले शुभकामना अदान–प्रदान गरे -
१५ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:२८ १५ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:२८ १५ चैत्र २०७७, आईतवार ०६:२८ क्लोथ बैंक धनुषा
होलीको आगमनसंगै जनकपुरधामको ठाउँ–ठाउँमा होली मिलन समारोह भइरहेको छ । एक अर्कालाई रंग अबिर लगाई होलीको विशेष परिकार मासु र पुवा खुवाउने चलन समेत बढेको छ ।
यसैक्रममा क्लोथ बैंक धनुषाले होलीमा भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकका पदाधिकारी, सदस्यहरु सहित कोरोनाकालमा बैंकसंगको सहकार्यमा मेडिकल अभियान चलाएको चिकित्सको समूह, सञ्चारकर्मी, युवा र राजनीतिक अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
समारोहमा शुभकामना आदान प्रदान समेत गरिएको छ ।
बैंकका अध्यक्ष तथा जसपा नेता राजिव झाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जसपा नेता मनोज चौधरी, राजु चौधरी डा. अजय मिश्र, डा. अजय झा, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपप्रमुख दिपक झा, महिला नेतृ विभा ठाकुर, र्बैकका सचिव मनिष श्री ओम, कोषाध्यक्ष रुवी झा, गोपाल साह सहितको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा र्बैकका अध्यक्ष झाले क्लोथ र्बैक स्थापना, गरीबलाई दिदै आएको कपडा र कोरोना कालमा चिकित्सकको सहयोगमा शुरु गरिएको क्लिनिक सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए ।